Vaimbova gurukota rezvemari, VaIgnatius Chombo, vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pavamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuita chikiribidi pamwe nekushandisa hofisi yavo zvisiri izvo mukutengeswa kwemasitendi muHarare.
Muchuchisi wenyaya iyi, VaCharles Muchemwa, vaudza dare kuti VaChombo, avo vakasungwa neMuvhuro, vakaita chikiribidi mukuwana masitendi zana nemakumi matatu muHarare vachishandisa makambani avo akati wandei kuisa masitendi aya muzita mavo.
Rimwe remagweta aVaChombo, VaLovemore Madhuku, vasvitsa chikumbiro kudare chekuti VaChombo vatongwe vachibva kumba kwavo sezvo vachiti hapana mhosva ine kumeso yataurwa mumapepa ekupomera VaChombo mhosva.
Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi, Superintendent Maxwell Gudoricharima, vaudza dare kuti nyaya dziri kupomerwa VaChombo dziri mugwaro rakaburitswa nekomisheni yaitungamirwa naVaTendai Uchena, iyo yakagadzwa nemutungamiri wenyika,VaEmmerson Mnangagwa.
Kmisheni iyi yakaburitsa pachena kuti masitendi mazhinji ehurumende mumatunhu ose enyika akatengeswa zvisina tsarukano ikakomekedza kuti paongororwe kuti zvii zvakatora nzvimbo mukutengeswa kwemasitendi aya.
VaGudoricharima vati vachiri kuita tsvagiridzo yekuti zvii chaizvo zvakaitwa naVaChombo asi vakati humbowo hwavainahwo pari zvino hunoratidza kuti VaChombo vane chekuita nekutengeswa kwemasitendi aya zvine chikiribidi sezvo vaive gurukota rezvematunhu.
Muchuchisi wenyaya iyi apikisa chikumbiro chaVaChombo achiti VaChombo semunhu aimbove gurukota rehurumende vanogona kuvhiringidza vafakazi sezvo vamwe vafakazi panyaya iyi vari vanhu vaimboshanda naVaChombo mubazi rinoona nezvematunhu.
Vatiwo semunhu aiva gurukota rehurumende, VaChombo vanogona kutiza munyika vakasamirira kutongwa sezvo vachiti nechinzvimbo chavaive nacho muhurumende, munhu anozivana nevanhu vakawanda kunze kwenyika.
Asi VaMadhuku vati zvataurwa nemuchuchisi wenyaya iyi hazvina musoro sezvo hurumende iri kungotsvaga uta nemugate.
VaMadhuku vatiwo VaChombo vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika sezvo vari mumwe wevakasungwa panguva yakapindira masoja mune zvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbove mutungamiri wenyika, muchakabvu VaRobert Mugabe, vasiye basa muna 2017.
Mutongi wedare, VaStanford Mambanje, vati vachatura mutongo wavo mangwana panyaya iyi.
VaChombo vakasungwa zvakare muna 2017 vakapomerwa mhosva dzakafanana nedzavari kupomerwa pari zvino uye vachiri vakamirira kutongwa kwenyaya idzi.